Shozụ ahịa ahịa na ecommerce | ECommerce ozi ọma
Shozụ ahịa ahịa na ecommerce
José Ignacio | | Eziokwu na akụkọ, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Mmetụta smartphones nwere na ndụ nke ọtụtụ ijeri mmadụ bụ obi ọjọọ. Ma obu ngwa oru eji eme otutu ihe. N'ime ndị ọzọ, zụta. Ihe na-arịwanye elu n'ihi na ojiji nke ekwentị mkpanaaka na ịntanetị na-aba ụba.
Ekwentị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa na-aga nke ọma na azụmaahịa e-commerce. Ka ọ na-erule afọ 2021, a na-atụ anya ire ahịa e-commerce na-atụgharị anya maka 54% nke ahịa e-commerce niile.
Na mgbakwunye na iji mkpịsị aka ịzụrụ ihe, ndị ahịa na-ejikwa mkpanaka iji nyochaa mkpebi ịzụta tupu ha azụrụ n'ụlọ ahịa ma ọ bụ na tebụl. A na-eme atụmatụ na 73% nke ndị ahịa na-ekwu na ha na-enwe mmasị ịga n’ surfntanet tupu ha azụta n’ụlọ ahịa. Na BrightEdge, anyị na-esokwa uto nke e-azụmahịa. Anyị chọpụtara na na 2017, 57% nke okporo ụzọ n'ịntanetị sitere na ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba, nke nwere mmetụta dị mkpa na ụdị azụmahịa e-commerce.
1 Ihe kpatara Mobile Shopping
2 Gini bu ahia ahia?
3 Uru na ọghọm nke ahịa ekwentị
4 Igodo 5 maka ire ahia nke ụlọ ahịa n'ịntanetị
5 Otu esi ahụ okporo ụzọ mkpanaka gị na nchịkọta
Ihe kpatara Mobile Shopping
Ihe dị mma nke ndị ahịa na ịzụ ahịa mkpanaka amụbaala, ya mere ụlọ ọrụ enweghị ike ileghara mkpa nke mkpanaka na ụwa nke e-azụmahịa.
Kedụ ka m ga - esi bulie e-commerce ekwentị?
Ndị na-ere ahịa ecommerce dị ka gị kwesịrị iji weebụsaịtị nke na-arụ ọrụ yana ụdị ihe eji eme ihe na saịtị ahụ, mana enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji mee ka ecommerce ibe gị nwee mmekọrịta enyi na enyi.
Mee ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịchọta ụlọ ahịa nkịtị
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ iji atụnyere ịzụrụ ihe n'ịntanetị tupu ịzụrụ na ụlọ ahịa, na-eme ka itolite site n'ịzụ ahịa n'ịntanetị gaa ịzụ ahịa mmadụ.
Nyere ndị ahịa aka ịghọta ngwaahịa ndị ahụ.
Gụnye vidio ngwaahịa na-eji agagharị agagharị, ike ibubata ihe onyonyo, na ihe ngosi dị mma iji nyere ndị ahịa aka ịghọta ngwaahịa gị ma nwee ntụkwasị obi karịa tupu ịpịa bọtịnụ 'ịzụta'.
Mee ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịkwụ ụgwọ
Kwụ ụgwọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka maka ndị ọrụ ekwentị mkpanaaka n'ihi na usoro nke nọmba, dị ka ndị dị mkpa maka kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ nlele, na-esikarị ike ịde. Kama, ịnwere ike inye ndị mmadụ ikike iji mepụta akaụntụ na saịtị gị, ebe ha nwere ike ịchekwa ozi kaadị akwụmụgwọ ha. I nwekwara ike ime ka ọ dịrị ha mfe iji nhọrọ ịkwụ ụgwọ ekwentị, dịka PayPal, Google Wallet ma ọ bụ MasterCard MasterPass. Otu nnyocha chọpụtara na ịnye ndị ọrụ ndị ọzọ nhọrọ ndị a dugara na ịrị elu 101% na mgbanwe ntụgharị maka ndị ọrụ ama ama.
Cheta otu o siri sie ike ide ihe omuma n’igwe adighi ike. Belata ụdị dị na ibe ahụ ma mezue ihe ị nwere ike.
E-commerce mobile na-aghọ ngwa ngwa ụlọ ọrụ. Sdị ga-adị njikere ijere ndị ahịa a ọnlaịnụ na ụlọ ahịa. Nzọụkwụ mbụ n'ịmepụta ahụmịhe ọrụ ọrụ a dị egwu na-eme ka saịtị gị zuru oke.
Nsonaazụ nke ngwa gị
Na post nke taa anyi n’agwa gi ihe ahia ahia nke ulo ahia di na ntanetị na ihe ikwesiri ime ka ndi ahia ghara ihafu dika na ihe omuma atu mbu.
Gini bu ahia ahia?
Ebumnuche nke ịzụ ahịa mkpanaka, dị ka akọwapụtara na Wikipedia, bụ usoro ịzụ ahịa ịntanetị dị ọtụtụ na-elekwasị anya na iru ndị na-ege ntị kpọmkwem na smartphones ha, mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla metụtara ya site na weebụsaịtị. Ọ gụnyere ọrụ niile metụtara imepụta, mmejuputa na ogbugbu nke omume ahịa.
Malite na nkọwapụta izugbe mbụ a, anyị ga-elekwasị anya na akụkụ ikpeazụ: "imewe, mmejuputa ya na mmebi ya", n'ihi na nke a bụ kpọmkwem ihe anyị ga-eme: megharịa ọrụ e-commerce anyị na ntanetị nchọgharị.
Mkpa ọ dị ire ahịa ekwentị
Ihe a niile mere na njedebe nke afọ 2016, mana anyị hụrụ ka ọ na-abịa n’oge na-adịghị anya. Na November 1, Global Stats bipụtara otu akụkọ na-ekwu na iji ekwentị mkpanaaka karịa nke kọmputa nkeonwe na nke mbụ ya. Ahịa ekwentị na-achịkwa yana nke ahụ anaghị atụ anya ịgbanwe na-aga n'ihu.
Ọ bụghị naanị na ndị mmadụ na-eji mbadamba nkume ha ma ọ bụ ekwentị ha elele ozi ịntanetị ha ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta, kamakwa ha na-eji ha atụnyere ma zụta ngwaahịa. Ahịa ahịa abụghịzi nhọrọ maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ bụ ọrụ.
Uru na ọghọm nke ahịa ekwentị
Anyị maara na azụmaahịa mkpanaka na-apụ na chaatị ahụ wee bụrụ nke a ga-enwerịrị, mana tupu anyị erute azụmahịa, ka anyị lelee uru na nsogbu ọ ga-eche ihu.
Nnweta na ngwa ngwa: ndị ọrụ na-eji ekwentị ha mgbe niile ma lelee ha ihe dị ka ugboro 150 kwa ụbọchị na nkezi. Jikere maka mgbe ọ bụ oge gị! 😉
Nhazi dị mfe: ịmepụta na ịmepụta ọdịnaya maka ngwaọrụ mkpanaka dị mfe - obere dị ọtụtụ ebe a.
Ndị na-ege ntị: Ọ bụ ezie na ọ bụghị mmadụ niile nwere ma ọ bụ jiri kọmputa na-eme ihe mgbe niile, ọtụtụ ndị na-eji ekwentị ha eme ihe kwa ụbọchị. Kwadebe atụmatụ gị maka ndị na-ege ntị na-eme ka iru gị.
Uto: Ọ bụ ezie na ọ dịka ọ gaghị ekwe omume ịghara ime ya, mmekọrịta dị n’etiti ekwentị mkpanaaka na ntanetị bụ ihe ọhụụ na-enwe nnukwu ikike itolite.
Mfe nke ịkwụ ụgwọ: ụzọ ịkwụ ụgwọ kachasịsịsị adị 100% na-enwe mmekọrịta enyi na enyi.
Igwe dịgasị iche iche: ngwaọrụ ọ bụla nwere nha dị iche, ọ bụ ya mere na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịme ụlọ ahịa ka ha kwekọọ na ha niile. Nwere ike ịlele ka ebe nrụọrụ weebụ gị si egosi na ngwaọrụ dị iche iche site na iji ngwaọrụ ịntanetị a.
Nzuzo: Ọ dị mma ịme nchọgharị ka ọ dị mfe, mana ịkwụsị ya na ozi na ọkwa nwere ike iwe.
Mmachi igodo: maka ihuenyo 5-anụ ọhịa na-enweghị oke, ị ga-ahọrọ nke ọma ihe igosipụta; ezughị ezu maka ihe niile.
Omume: ọ bụ ezie na nchọgharị mkpanaka karịrị nke PC, anyị ka na-ahọrọ kọmputa mgbe ịzụrụ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji ama naanị iji lee anya na ịtụle, mana chere ka ịzụrụ ihe na kọmputa.
Iji rite uru zuru oke nke uru ndị a ma belata nsogbu ahụ, ka anyị hụ ihe anyị ga-eleba anya iji zere ịhapụ otu onye ahịa na-eleta ụlọ ahịa anyị site na ama.
Igodo 5 maka ire ahia nke ụlọ ahịa n'ịntanetị
Weebụsaịtị ọ bụla na eCommerce dị iche, mana site na itinye iwu ndị a, ị ga-ahụ na ị gaghị efunahụ otu onye ahịa dịka "ibiaghachi" naanị n'ihi na ị leghaara usoro ndị bụ isi nke azụmaahịa mkpanaka anya.
Nzube na-emeghachi omume: Otu nwere ike iche na nke a bụ ihe na-enweghị isi, mana enwere ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ndị a na-emezigharị atụmatụ ha na ngwaọrụ mkpanaaka.
Zere mmapụta: E wezụga na ha na-akawanye njọ maka SEO, ha na-ewekarị iwe na obere ihuenyo.
Ejila sidebar: na smartphone, akụkụ ahụ ga-egosi n'okpuru ihe niile, si otú a tufuo uru ọ bara.
Font size na agba: ahapụkwala nchikota nke ọcha ọcha + oji ojii, echiche ndị na - agụ akwụkwọ gị ga - ekele gị.
Obere paragraf: Ihe nwere ike ịdị ka obere paragraf na nnukwu ihuenyo nwere ike ngwa ngwa ghọọ nke buru ibu nke ga-emenye onye na-agụ ihe mkpanaka ụjọ.
Ma ugbu a anyị matara ihe ndị bụ isi, ka anyị banye n'ime ihe gbara ọkpụrụkpụ.
Etu esi edozi ụlọ ahịa dị n'ịntanetị maka smartphones
Iji gosipụta ụdị dị iche iche nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị karịa nke ị hụrụ na kọmputa nkịtị, ị nwere nhọrọ 2: mmeghachi omume na-anabata ma ọ bụ ngalaba dị iche.
Azaghachi ma ọ bụ na-emegharị
Ọ bụ otu ụdị desktọọpụ ahụ nke na-eji CSS (ụdị mpempe akwụkwọ) dabara obere ngebichi. Zọ a na-ahụkarị iji gbanwee ya bụ site na iwepu ụfọdụ ihe na-enye nsogbu dịka ihe mmịfe ma ọ bụ onyonyo.
Dị ka ọ dị, WordPress ma ọ bụ PrestaShop gburugburu ga-emezigharị na ndabara na-enweghị ihe ọ bụla ị chọrọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ gbanwee ihe, ị ga - eji ajụjụ mgbasa ozi mee ihe.
Nke a dị ntakịrị karịa, ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ọ bụla gbasara CSS, echegbula.
Ajuju mgbasa ozi bụ iwu CSS nke na-agwa ihe igosi ma ọ bụ ịgosipụta dabere na nha ihuenyo ahụ.
Site na iwu a, anyị nwere ike ịkọwa otu anyị chọrọ ka ibe weebụ anyị lee mgbe ihuenyo bụ 320 x 480px. Ndị a bụ akụkụ nkịtị nke smartphones.
Na nke a, na mgbakwunye na pikselụ, anyị nwekwara ike ịkọwapụta nghazi nke ihuenyo ahụ. Malite na 700px na n'elu, anyị na-ekwukarị banyere mbadamba mbadamba.
Dị ka ị pụrụ iche n'echiche, ọ fọrọ nke nta ka enweghi ngwụcha ọnụ ọgụgụ nke njikọta ma a bịa nha ngwaọrụ na nghazi, ọ dị mma? Nke a bụ nsogbu anyị kwuru maka ya na mbụ.
URL dị iche iche
Usoro a nwere inwe ụdị weebụsaịtị gị dị iche na URL dị iche, ya bụ, ọ bụghị ịmegharị ya. N'ụzọ dị otú a, mgbe ndị ọrụ jikọọ na ngwaọrụ mkpanaka ha, URL nke mkpanaka ahụ bụ nke ha rutere.
Iwu a bụ iji 'm' tupu URL mbụ. Nke a bụ otú Twitter si eme ya, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na ị gaa https://m.twitter.com, ị ga-ahụ ụdị mkpanaka ahụ ọbụlagodi na ị na-eji kọmputa gị.
Ndụmọdụ anyị bụ na ịkwesighi ịga ebe ahụ. O zuru ezu ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịhụ azụmahịa gị na ngwa ngwa na obere ngebichi.
AMP, Ebumnuche Google maka nchọgharị ekwentị.
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na mgbe ịchọrọ ihe na Google, a na-egosi ụfọdụ nsonaazụ na akara a.
Ọ bụ ọrụ Google nke na-elekwasị anya na imeziwanye ngwa ngwa mkpanaka mkpanaka. Ọ na-agbalite weebụsaịtị ahụ site na ịmachi ya ederede na ihe oyiyi, na-eme ka ọ rụọ ọrụ ngwa ngwa.
N'okwu nke aka Google: "AMP dị mma maka azụmahịa e-commerce n'ihi na AMP na-eme ka weebụsaịtị ngwa ngwa, weebụsaịtị ngwa ngwa na-akwalite mgbanwe ahịa."
Iji gbanwee ụlọ ahịa WordPress gị na AMP, ịnwere ike iji otu n'ime plugins ndị a:
AMP WooCommerce - Ọ dị mfe iji ngwa mgbakwunye.
WP AMP: ngwa mgbakwunye akwụ ụgwọ nke na-enye gị ohere itinye vidiyo na ọkọlọtọ AdSense, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Goodzọ dị mma iji bido ịmata AMP bụ ịmegharị post blog ma tụọ mmelite na ọsọ ọsọ tupu ịmalite WooCommerce.
Ọ bụrụ na iji PrestaShop, modulu ndị a na-enye AMP mmegharị:
AMP modul: na-efu ihe dị ka euro 72,59 ma nye gị ohere ịmepụta ibe AMP maka edemede, ngwaahịa na ụlọ.
Google AMP - Usoro a dị oke ọnụ, mana ọ bara uru. Ọ na - enye gị ohere ịhazi ihe ọ bụla ị ga - eche maka ma kwuo na ọ na - eme saịtị 7 ngwa ngwa. Ha bụ euro 149.
Nhọrọ ọzọ ikpeazụ bụ ịmepụta ngwa nke aka gị.
Ojiji nke ngwa a bu ihe amamihe ma oburu n’inweghari ahia nihi na odighi onye gha ebudata ihe eji zuta ososo. Dịka ọmụmaatụ, Amazon bụ otu ngwa eji eme ihe, mana ọ bụkwa Amazon ...
Otu esi ahụ okporo ụzọ mkpanaka gị na nchịkọta
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla banyere mmegharị ndị a ọ bara uru ma a bịa n'ịkwalite atụmatụ ịzụ ahịa mkpanaka gị, ị nwere ike ịlele ọnụọgụ nke okporo ụzọ mkpanaka maka e-commerce gị tupu oge eruo.
Anyị ga-eji Google Analytics maka nke ahụ.
Gaa na sidebar "Ndị na-ege ntị >> Mobile" na mgbe ahụ "Isi". N'ebe ahụ ị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ nleta na kedu pasent sitere na ekwentị, mbadamba ma ọ bụ desktọọpụ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga n’ihu n’iru, n’okpuru“ Ngwaọrụ ”ị nwere ike ị hụ ụdị ngwaọrụ ndị eleta gị: iPhone, Galaxy, ...
Normkpụrụ, dị ka ị pụrụ ịhụ, bụ na nchikota nke mkpanaka na mbadamba dịtụ elu karịa desktọọpụ.
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe na ebe nrụọrụ weebụ gị, ma ị mebeghị ihe ọ bụla banyere ya iji nabata ndị ọrụ niile ahụ… echere ọ bụla ọzọ!
You dịla njikere ime ka ndị na-eji ekwentị gị rụọ ọrụ n'ịhụnanya?
Chee echiche nke onwe gị ịnwa iji oge gị kachasị oge mgbe ị na-eji ụgbọ njem ọha ma ọ bụ na-echere mmadụ. Ọ ga-abụrịrị na ị zụtara ihe n'otu n'ime oge ndị ahụ.
Lọ ahịa anyị dị n'ịntanetị ga-adịrịrị njikere ịnata nleta, n'agbanyeghị oge ma ọ bụ otu esi abịa.
Soro usoro a na post n'ihi na na mgbakwunye na ire ọzọ, ị ga-emeziwanye ọnọdụ gị na weebụ.
Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị bụ ụdị azụmahịa eletrọniki nke na-enye ndị ahịa ohere ịzụta ngwa ahịa ma ọ bụ ọrụ n'aka onye na-ere ahịa na usingntanetị site na iji ihe nchọgharị weebụ. Ndị ahịa na-achọta ngwaahịa nke mmasị site na ịga na weebụsaịtị nke ndị na-ere ahịa ozugbo ma ọ bụ site na nyocha site na ndị na-eweta ngwaahịa ọzọ na-eji nyocha ọchụchọ ụlọ ahịa, nke gosipụtara nnweta na ọnụahịa nke otu ngwaahịa ahụ na ụlọ ahịa e-iche dị iche iche. Malite na 2020, ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa na ntanetị site na iji ọtụtụ kọmputa na ngwaọrụ dị iche iche, gụnyere desktọọpụ, laptọọpụ, mbadamba, smartphones, na ndị ọkà okwu mara mma.
Lọ ahịa dị n'ịntanetị na-akpali ntụnyere nkịtị nke ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na ụlọ ahịa "brik na ngwa agha" nkịtị ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa; A na-akpọ usoro ahụ azụmahịa na-azụ ahịa (B2C) ịzụ ahịa n'ịntanetị. Mgbe etinyere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị iji kwe ka azụmaahịa zụta site na azụmaahịa ndị ọzọ, a na-akpọ usoro a azụmaahịa na azụmaahịa (B2B) n'ịntanetị. Typicallọ ahịa dị n'ịntanetị na-enye ndị ahịa ohere ịchọgharị ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, lee foto ma ọ bụ ihe oyiyi nke ngwaahịa ahụ, yana ozi gbasara nkọwa, atụmatụ na ọnụahịa nke otu.
Storeslọ ahịa na ntanetị anaghị ahapụkarị ndị na-azụ ahịa ka ha jiri ọrụ "ọchụchọ" chọta ụdị, ụdị, ma ọ bụ ihe ụfọdụ akọwapụtara. Ndị ahịa dị n'ịntanetị ga-enwerịrị ịnweta Internetntanetị na usoro ịkwụ ụgwọ ziri ezi iji mezue azụmahịa, dị ka kaadị kredit, kaadị ịkwụ ụgwọ Interac, ma ọ bụ ọrụ dị ka PayPal. Maka ngwaahịa anụ ahụ (dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ akpa ma ọ bụ uwe), onye na-azụ ahịa e-ebufe ngwaahịa na onye ahịa; Maka ngwaahịa dijitalụ, dị ka faịlụ dijitalụ maka egwu ma ọ bụ mmemme kọmputa, onye na-ere ahịa na-ezigara ndị ahịa faịlụ ahụ na thentanetị. Ndị kasị ukwuu nke ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị bụ Alibaba, Amazon.com, na eBay.
Ọ bụ ezie na nchọgharị mkpanaka karịrị nke PC, anyị ka na-ahọrọ kọmputa mgbe ị na-azụ ahịa. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji ama naanị iji lee anya na ịtụle, mana chere ka ịzụrụ ihe na kọmputa. Dị ka ị pụrụ iche n’echiche, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ ndị na-enweghị ngwụcha nke ngwakọta
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Shozụ ahịa ahịa na ecommerce
Mgbanwe nke ọrụ nke netwọkụ mmekọrịta na ecommerce
Ndị ahịa na ecommerce